Ọrụ dị na Dubai Maka ndị mba ọzọ ✰✰✰✰✰ Expats Site na ụwa dum
Dubai maka ụmụaka - Ọrụ na ịzụ ụmụ na Dubai
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at July 27, 2018
Ọrụ na Dubai maka ndị mbịarambịa n’ụwa niile. Kwụsị achọ ọrụ. Weghara ohere na ike anyị. Ndị otu anyị nke ndị ọkachamara ọkachamara. Inyere aka inweta ndu ohuru di Emirates. Karịsịa maka ndị ọrụ ọhụrụ na mba ọzọ. N'ihi Ọrụ na Dubai. Buru na ndi ala ọzọ ekwe omume. Buru nke a n'uche, anyị na-ewere ndị na-eme egwuregwu si n'akụkụ nile nke ụwa. Ndị otu anyị maka nke a na-akpali ndị ọgbọ. Iji nweta ọrụ n'ụwa nile. Ebe ọ bụ na anyị malitere ịrụ ọrụ. Ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ nwere ike bulite a CV maka ụlọ ọrụ anyị na Emirates. N'ịkọwapụta, ọtụtụ n'ime ha na-enweta ọrụ sitere ná mba ndị ọzọ.
Ohaneze na-ekwu, Ndi United Arab Emirates. Bụ ebe bụ isi maka ndị mba ọzọ. N'ihi na obodo Arab a dị na Ọwara Persia. N'iburu nke a n'uche, ebe a dị mma maka Indian na Ndị isi Pakistani. Ọ dị mma nke Dubai City na Abu Dhabi. Buru onye isi ụlọ ọrụ azụmahịa na UAE. N'ihi na ala ya na Oman na Saudi Arabia. Ọtụtụ ihe na-agba ume na-ekwu na ha na-eme nke ọma azụmahịa. Karịsịa na agbata obi. Ọzọkwa, asụsụ ndị ọrụ bụ Arabik. Ma ọ bụ mma ịmalite na UAE. Nanị n'ihi na nzọụkwụ ọzọ nwere ike ịbụ Qatar na Saudi Arabia.
Ma na akụkụ na-adịghị mma, e nwere ihe ole na ole dị mkpa ka a gbasoo. Tupu mmadụ ọhụrụ agafee na Emirates. N’ohaneze na-ekwu otu anyị ga-esi na-ahazi ọrụ. Edeela ọtụtụ nduzi na akụrụngwa. Karịsịa maka ndị isi ọhụụ. Iji nyere ha aka ịmalite maka ịchọ ọrụ na Dubai City. N'ihi na ịchọta ohere dịka onye mba ọzọ. Ọ na-esiri ike karịsịa na United Arab Emirates.
Maka ezigbo ọrụ na-eji ebe nrụọrụ weebụ na-achọ ọrụ
N'ikwu okwu, jiri ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ na UAE. Ndị otu anyị etinyela ọtụtụ ndị nduzi dị mma. Karịsịa maka ọhụrụ ndị mba ọzọ n'èzí. Mana, ndị otu anyị kpọtụrụ saịtị ole na ole n'okpuru ọzọ. N'akụkụ na-adịghị mma, a standardkpụrụ onye anaghị atụ anya oke. Nnukwu nzaghachi dị gburugburu 2.0% ruo 3.0% yana n'ezie ọnụego nzaghachi dị ala. Na ọtụtụ ikpe ndị ga-aza gị. Eleghị anya ọ bụghị onye ahụ ị tụrụ anya ya. Ma ọ bụ inweta ọrụ nwere ike ịbụ n'okpuru ihe ị tụrụ anya. Mara onye ị zipụrụ akwụkwọ ozi gị na CV. N'ihi na e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ntamu niile n'ụwa.
o sina dị, Ụlọ ọrụ Dubai City na-agba gị ume ịnwale. Debanye aha gị nkọwa zuru ezu na saịtị ọrụ na ụzọ ọrụ ndị ọrụ. N'ikwu okwu, nye ndị na - ewe ndị ọrụ ọrụ ọrụ ohere. N'ihi na ị maghị ihe ị ga-abịa. Ebeekwa ị nwere ike ịda n'ala Middle East. N'ihi na karịsịa na Dubai City. Otu dị mfe ikwu okwu nwere ike ime ka ọrụ dị mfe. Ị nwere ike ịghọ onye ọhụụ ọhụrụ. Ọ bụ n'ihi engines na-achọ ọrụ n'ozuzu. Ọ dị mma maka ọrụ ọhụrụ na ọrụ na Dubai maka ndị ala ọzọ ka na-emeghe. Ma, ọrụ ịzụ ahịa na-agbakwụnye nwere ike ime ka ị nwee ọhụụ ọhụrụ.
Kedu otu esi achọta ọrụ dị ka onye nlekọta?
Chọpụta ihe gbasara saịtị ọrụ na UAE
Banyere Gulf Talent: Otu n'ime ihe kachasị mma na Gulf. N'ikwu okwu n'ozuzu, tinye ya n'ọtụtụ ezigbo ọrụ. Kwa ụbọchị emelitere ohere maka mba Gulf. Ma nye ndị ọrụ ọrụ ọrụ na Qatar na Abu Dhabi. Ọtụtụ mmadụ hụrụ ọrụ na Dubai maka ndị ala ọzọ na webụsaịtị a.
Banyere Bayt: No1 Company na Middle East. Edere nke ọma maka ndị ala ọzọ. Na otu n'ime weebụsaịtị websaịtị ọrụ dị elu. Ndị mmadụ nọ na Middle East na India yana International. Na-eziga CV na ndị isi ha.
Banyere Edarabia Companylọ ọrụ a bụ otu n'ime ngwa ngwa na-eto. Lọ ọrụ kachasị nweta ya bụ ịkụziri ndị mmadụ na ndị mba ọzọ. Companylọ ọrụ a bụ otu n'ime ndị nwere ọkwa dị elu Google. N’ezie, inwe ụfọdụ ọrụ na-enye. N'aka nke ozo, ụlọ ọrụ na-enye ezigbo ndị nduzi maka ndị ọrụ.
Banyere Dubizle bụ ebe nrụọrụ weebụ ọkwá dị elu. Karịsịa na Dubai City. N'aka nke ọzọ, jndị na-achọ ihe na-eji ngalaba UAE ha achọ ọrụ na visa. Startlọ ọrụ malitere ọrụ na 2005. Kemgbe ahụ ijuzzle.com abụrụla nke ewu ewu. Na ọnụ ọgụgụ nke E zigara ọrụ ọhụrụ. Nke a na-ekwu okwu n'ozuzu ikpo okwu. Maka ndị na-achọ ọrụ na ndị ọrụ.
Oké Osimiri Monster
Banyere Ọwara Oké Osimiri: Na websaịtị ọrụ anụ ọjọọ. Can nwere ike ịchọ ọrụ. N'ihi na ụlọ ọrụ ahụ anọwo ogologo oge. Ma kemgbe ahụ anụ nwere nnukwu ogo. Ma mara mma nke ukwuu ndị mmadụ na-edebanye aha ha.
Banyere Glassdoor: ụlọ ọrụ, dị ka eziokwu, na-amalite ịtụkwasị ohere. Karịsịa maka Dubai na Abu Dhabi. Kemgbe ahụ, ụlọ ọrụ nwere ike inweta nyocha. Tinyere itinye ajụjụ ọnụ. Ọzọkwa, ndị na-achọ ọrụ nwere ike itinye akwụkwọ maka ọrụ MBA.
Banyere Jet ọrụ Careerjet bụ ihe nchọta kacha arụ ọrụ na ọrụ. Imirikiti mmadụ na-enwe ike iji ya UAE. N'agbanyeghị ihe bụ ahụmịhe ha. N’aka nke ọzọ, sistemụ arụpụtara eme ka usoro ịchọta ọrụ dịkwuo mfe. Ịntanetị na-adịwanye mfe maka onye ọrụ ahụ. Mgbe ụlọ ọrụ jet na-arụ ọrụ amalite ọrụ.
Ndị na-arụ ọrụ na Dubai
Banyere ndị ọrụ Dubai Ndị na-arụ ọrụ na Dubai bụ ọrụ ọnụahịa. Ọzọkwa bụ otu usoro ohuru nke onye choro oru. N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-azụlite ya site na Smart Dubai Government Establishment. Yabụ, ha na-enwe nkwenye dị elu. N’aka nke ozo, Portal a gha aghagharia uzo ya na UAE.
Banyere Reed: Nke a bụ otu n'ime nnukwu UK nyocha ọrụ injin. N'aka nke ọzọ, nwere akwụkwọ ọrụ maka UAE. N’iburu nke a n’uche, ndị si UK na Ndị na-achọ ọrụ n'ụwa. Nwere ike itinye maka ohere ọhụụ ọhụrụ. Ọzọkwa, ha na-etinye ọrụ ọrụ na GBP. N'ihi ya, ọ bara ezigbo uru ile anya.
Banyere N'ezie ha na-azụ ahịa bụ ọrụ nke ọrụ No1. Echekwara na top 3 n'ụwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ ahụ na-amụbawanye. Na ihe karịrị 200 nde ndị ọbịa pụrụ iche na 2018. Na inwe ihe ịrịba ama ọhụrụ ọ bụla kwa ọnwa.
Banyere Naukri, Ụlọ ọrụ Dubai City kwuru banyere saịtị a. Ọ bụ n'ihi na Naukri ejirila ndị ọzọ nweta ụwa niile. Ọmụmaatụ, na India, UAE, na Qatar Ebe a na-achọ ijuputa ọrụ maka ndị ọrụ ná mba ọzọ. Tinyere onyinye a na-enye ugbu a n'elu ahịa mpaghara.
Banyere Laimoon: Ọrụ a abụghị otú ahụ ewu ewu maka ọrụ na UAE. N'ihi webụsaịtị a na-anakọta ọrụ mmeghe site na webụsaịtị ụlọ ọrụ. ozugbo ma nweekwa nke ederede maka Qatar na Saudi Arabia.
Ọrụ na Dubai N'ihi na ndị mba ọzọ kwesịrị ya?
Enwere otutu arụ ọrụ na UAE. Site na nkuzi bekee rue oru aka. Ibido n’ebe dị ala nwere ike ịbụ nhọrọ. Naanị ma ọ bụrụ na ị bụ onye asụsụ ala ọzọ n ’asụsụ Arabik. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na enweghi ahụmịhe zuru ezu. na-enweghị asụsụ Arabic na Dubai. Ohere di ala di ala. Saịtị niile dị na elu. Definitely dị njikere maka ọrụ na Dubai maka ndị ala ọzọ. Ọzọkwa, ha niile dị mma yiri.
N'akụkụ ọjọọ, ha nile nwere nnukwu oke ọrụ ọrụ. Yabụ, n’iburu nke a n’uche, ọtụtụ mmadụ na-ezigharị mmalite. Ndị na - achọ ọrụ ọhụụ nwere ike ijikwa ngwa ha kwa ụbọchị. Dabere na saịtị ọrụ ọ bụla. N'akụkụ dị mma, Dubai na-etolite ruo ọtụtụ iri afọ. Asụsụ Bekee wee bụrụ nke bụ isi na Emirates. Buru nke a n'uche, ọrụ ọrụ na United Arab Emirates. Ọzọkwa, bido ito mba ụwa. Ọzọkwa, ọrụ na Dubai maka ndị mba ọzọ na-emepe emepe. Maa ndị ọrụ ọhụrụ ná mba ọzọ. Nwere ike ịtụ anya ịchọta ezigbo ọrụ. Na mba dị iche iche na gburugburu Mpaghara Ọwara. Nwere ike ịbụ ebe obibi ọhụrụ maka ndị ala ọzọ.
Iwu Dubai maka ndị mba ọzọ dị mma?
UAE bụ otu n’ime ebe kachasị mma n’ụwa. N'aka nke ọzọ, usoro iwu dabere na ụfọdụ azụmahịa siri ike. Iji maa atụ, nkọwa siri ike nghọta gbasara iwu Shariah. Ma n’agbanyeghi ihe na - eme, aghaghi igbaso ya. Otu n'ime ihe atụ bụ ndị ọrụ ụwa. Ha na-abanye n'ime Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai maka ọrụ. Malite ndụ ha dị ka onye mba ọzọ. Ma ghara ịgbaso iwu. Ya mere, n'ihe gbasara oge, tụba n'ụlọ mkpọrọ maka mmejọ. Nke a mere UAE ji agbalị ịkụziri ndị Western. Ihe ime na emela na UAE. Nke ahụ nyeere ha aka na agaghị eme ha otu mpụ.
N'akụkụ ọjọọ, e nwere ihe atụ ndị na-adịbeghị anya na Obodo Dubai. Na njem nleta ndị mba ọzọ mebiri iwu ahụ. Gbalịa ka ndị ọkàiwu soro gị. O di nwute, nke UAE iwu siri ike maka onye ọ bụla. Gụnye aka mgbe niile na ọha. Ọzọkwa, ikenye otuto na Facebook maka ọrụ ebere. Ọzọkwa ị drinkingụ mmanya na-enweghị akwụkwọ ikike amachibidoro ọha na eze. Kpoo ụfọdụ akụkọ ọjọọ, dịka ọmụmaatụ, isoro onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị kerịta otu ụlọ nkwari akụ.
Ọzọkwa, ndị isi obodo Dubai adịghị mma n'ụzọ ụfọdụ. Na gọọmentị na United Arab Emirates. Na-ele anya mgbe niile ọtụtụ ụzọ maka ajụjụ. Anabataghị ịda iwu Sharjah ma a bịa omume ọjọọ nye ndị mba ọzọ. N'akụkụ dị mma, enwere ole na ole maka ndị mba ụwa. Ọmụmaatụ, Dubai na Abu Dhabi hotels agwala di na nwunye maka ikikere di na nwunye ha.
Kedu nke bụ nkịtị maka ndi bi n’ime obodo Dubai. Ọzọkwa, UAE nwere ndụ abalị maka mmadụ niile. Nke ahụ nwere ike iju gị ọfụma mana ọtụtụ ụlọ mmanya na-ewu ewu na ụlọ oriri na nkwari abalị East Europe ndị akwụna na-achọpụta ndị ahịa ọhụrụ. Ndi ọtụtụ ndị na- meghere maka mba niile na UAE.
Nwee anya mba dị iche iche na-arụ ọrụ. Enwere ọtụtụ nhọrọ na mpaghara Ọwara!
Qatar, Saudi Arabia, UAE, Jọdan
Qatar na ndị ọhụụ
Kedu otu esi amalite dị ka otu n'ime ndị mba ọzọ na Qatar?
Na Qatar, enwere otutu uzo iji nweta oru. Iji maa atụ, otu akụkọ sitere na Amnesty International kwuru nke ahụ ndị ọrụ mba ọzọ na-ahụ maka ihe owuwu ụlọ maka obodo ọhụrụ na Qatar. Nke na-ezube ime ihe dị ukwuu ọzọ expats na Qatar. N'aka nke ọzọ, a na-erigbu iko ụwa na egwuregwu 2020 ma na-enweta mmebi ikike ụmụ mmadụ nwere oke agbanyeghị nkwa nke mgbanwe gọọmentị. N’aka nke ozo, enwere otutu ihe ichoro ima tupu ịkwaga Qatar.
Ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla gbasara iwu ọ bụla. Akụkọ nke ụlọ ọrụ ole na ole depụtara ụlọ ọrụ injinia aha ya bụ Mercury MENA, nke hapụrụ ihe dị ka ndị ọrụ 80 si Nepal, India, na Philippines dara n'ala na akwụghị ụgwọ maka ọnwa na Qatar. Yabụ, ị ga-ahọrọ ụlọ ọrụ dị mma mgbe niile ịrụ ọrụ na Middle East.
Mana Gọọmentị boro ụlọ ọrụ ndị ahụ ebubo. Naanị n’ihi na achọpụtara ya na ha ji usoro Kafala nọchiri anya mmemme nkwado Qatar. Nke ahụ na-emekwa ka ndị were ọrụ rapara n'ahụ otu onye were ha n'ọrụ iji gbue ọtụtụ ndị ọrụ si mba ọzọ. Na Nepal, ndị mmadụ 34 gwara ndị Amnesty na Mercury MENA sitere na ha ji ọkara 1,500 pound, ma na-eji usoro Kafala erigbu ha. Yabụ, gbalịanụ ịgwa ndị otu anyị okwu ma ọ bụ, ọ dịkarịa ala, zere ụlọ ọrụ ọjọọ.
Kedu ka esi etinye maka ọrụ na Qatar?
Qatar kacha mma saịtị ọrụ ndị metụtara gọọmentị. Otu n’ime ihe atụ bụ Ebe ulo oru nwere ulo oru. Ha bụ otu n'ime saịtị kachasị mma amaara maka centralized visa ozi. Na ị nwere ike họrọ ụdị Visa ị na-achọ inweta. Iji maa atụ, inwere ike itinye akwụkwọ maka visa ụmụ akwụkwọ, visa onye ọbịa, visa ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere enweghi nsogbu ịchọta ozi dị na Google. Ebe kachasị mma maka nke ahụ bụ onye ọrụ obodo. N'aka nke ozo, ị nwere ike ịga na consulate na obodo nke gị. Ha nwere visa ha niile maka Qatar. Yabụ, ugbu a bụ oge ịkọwa saịtị dị maka ndị na-achọ ọrụs na Qatar edepụtara n'okpuru.
Jobschọta ọrụ na Qatar dị ka onye mba ọzọ adịghị mfe n'agbanyeghị, ma e jiri ya tụnyere etiti ozo - mba ndi ọdịda anyanwụ mana enwere ike. Akwụkwọ ndị achọrọ nke nwere ike ịna-achọ akwụkwọ maka ọrụ ahụ buru oke ibu. Ma ụgwọ ọrụ ha fọrọ nke nta otu nke kachasị mma na Middle East.
Saudi Arabia na ndị ọhụụ
Kedu esi amalite dị ka otu n'ime ndị ọrụ mba ọzọ na Saudi Arabia?
Ọfọn, na Saudi Arabia, ndị ọrụ ala ọzọ kwuru na 15million dị ka ọ dị na 2019. Na Achọpụtara azụmahịa mmanụ na ohere ọhụrụ na obodo a nnukwu ikike. Nke a bụ ihe mere agbamume jiri gbaa ume na ngwụcha 1930s. Ka ọ dị ugbu a, ha nwere oke nhọrọ maka mmepe Saudi Arabia. Yabụ, ha na-ewere ndị ọrụ ndị mba ọzọ ọrụ. Agbanyeghi na edokwara ụfọdụ na ngalaba ndi ozo dika oru ugbo, ulo oru ulo na ihicha ocha. Dị ka ndị Saudi Arabia na-ahụ maka ọrụ ka enwe ihe obula na njikere igha n’oge.
Dị ka ọkọlọtọ Muslim obodo. Mba nke ndị mba ọzọ na-ekpebi nhazi nke ndị ọrụ mba ọzọ. Enwere ike iju gị anya, dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ si India na mba ọdịda anyanwụ bụ ndị akpọgala Saudi Arabia. Ha na-ejikarị ọkwa ndị kachasị elu nke ndị nchịkwa Saudis na-ejideghị ya. Na ala ọnọdụ na-ẹkenịmde site na Ndị Afrịka na Ndịda Ndịda Ọwụwa Anyanwụ.
Obodo Saudi Arabia bụbu onye kachasị daa ogbenye na ọtụtụ mba ndị n’agaghị n’ụwa ogologo oge gara aga. Mana tupu nchọpụta mmanụ mmanụ site n'aka Texaco oil (ụlọ ọrụ America). Ọ bụghị oge mgbe nchọpụta ahụ gachara. The enyemaka ndị mba ọzọ na ọkachamara Achọrọ iji ala mmanụ dị ukwuu achọpụtara.
Enwere ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ala ọzọ na Saudi Arabia. N'ihi ya Chọpụta bụ nke sitere na mba ndị ọzọ na Middle East. Ihe oru mmepe ya na atumatu ihe ndi mmadu n’eme ka otutu ndi nwere aka ha di ike ya na ndi oru n’enweghi ego. N'iburu nke a n'uche, ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị Palestaịn. Na mgbe ahụ, ha malitere ịnata ndị Ijipt, ndị Yemen na ndị ọzọ site na mba Arab.
Ya mere, enwere m ọrụ ọ bụla na Saudi Arabia?
A maara Saudi Arabia ka ọ bụrụ obodo Arab kacha baa ụba ruo 2023. Nke ahụ bụ n'ezie ozi dị mma maka ndị ọgbọ. Ha nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emi odude ke Middle East. Companylọ ọrụ anyị dị ebe a na-achọ ọrụ mgbe niile maka ndị na-achọ ọrụ dị ka onye mbịarambịa na Saudi Arabia. N'akụkụ na-adịghị mma, Na Saudi Arabia, usoro visa ahụ adịbeghịkwa mfe ịnweta. Anyị ga-ekwu otu n'ime ihe ndị kachasị sie ike na ụwa. Karịsịa maka ndị ala ọzọ si Europe ma ọ bụ na United States.
Ndị otu na - ahụ maka mgbasa ozi nke gọọmentị Saudi anaghị azụ ahịa njem nlegharị anya. Ha abụghị ụdị ndị Dubai na-anabata. Yabụ, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume ịnweta visa ndị njem na-erughị izu 2. Enwere echiche nke jụrụ ịbanye na Saudi Arabia. Karịsịa maka ndị nwere Israel stampụ. Yabụ ọ bụrụ na i si obodo a nwere paspọtụ emelitere. Ihe ọ sọkwara gị mee, ha chọrọ akwụkwọ ọ bụla. Mana nke a nwere ike chọọ itinye akwụkwọ maka ọrụ gị. Ọtụtụ mgbe, agbanyeghị.
Otu n'ime atụmatụ kachasị mara maka ọrụ ebe ahụ. A ga-enwerịrị akwụkwọ dị ka asambodo nke mbụ nweta n'ụlọ akwụkwọ. Ọ ga-enyere gị aka karịsịa ma ọ bụrụ na i mere ka ha bata otu n'ime mba Alakụba. Dịka ọmụmaatụ kọleji ma ọ bụ mahadum, asambodo agwa na asambodo ndị ọzọ metụtara ya. Site na Mahadum dị na Qatar ma ọ bụ United Arab Emirates. Ma n'akụkụ dị mma, naanị ihe ga-enweta gị ọrụ bụ CV gị. Yabụ, ịkwesịrị ịma ebe iji kụrụ ihe ntinye. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eme ahia ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ndị ga-ewe gị n'ọrụ, ọ dị mma ka gị na gị rụọ ọrụ. Ma oge na mgbalị ị ga - eme iji mee ka CV gị zuo oke. Chọrọ ka ị funahụ n’oge ọ bụla.
United Arab Emirates na ndị Ọhụụ
Kedu otu esi amalite dị ka otu n'ime ndị mba ọzọ na UAE?
Ọfọn, na UAE (United Arab Emirates), Gọọmentị UAE bụ maka ndị si mba ọzọ. Na obodo a nwere obi uto iburu ndi oru ohuru si mba ozo. Ọzọkwa, ndị ala ọzọ sitere n'akụkụ niile nke ụwa. Ndi Na-achọ ịkwaga ebe ahụ mgbe ụtụ isi anaghị akwụ ụgwọ. Ọzọkwa, a na-ewere ọrụ ndị metụtara gọọmentị ka ndị kacha mma. Naanị n'ihi na ụmụ amaala UAE kwenyere na ihere dị soro ụfọdụ ọrụ aka na-arụ ọrụ. Imirikiti ndị Arab na-arụ ọrụ na nkwekọrịta gọọmentị na oru ngo ma ọ bụ na-arụ ọrụ ndị agha. Usoro visa ndị ọrụ obodo na akwụkwọ iwu kwadoro kachasị mfe. Ọzọkwa, ọha mmadụ, ma e jiri ya tụnyere obodo ndị agbata obi. Iji maa atụ, Saudi Arabia na Qatar bụ dị mma karịa n’usoro usoro mbugharị.
UAE nwere ọtụtụ ihe nkiri ndị nwedịrị ike iche. N’iburu nke a n’uche, ndị mba ọzọ n’ụwa niile na-akwaga ebe ahụ. Otu n'ime ndị na-achọ ọrụ anyị gụnyere bụ ndị sitere na mba ndị ọdịda anyanwụ. N'ikwu okwu, Emiratis pere mpe na ọnụ ọgụgụ ndị bi na mba ha. Iji maa atụ, n’ihe iteghete ruo otu. Ọzọkwa, gọọmentị UAE guzobere iwu ahụ. Nke ahụ na-ekwukwa na onye kwagara mba ọzọ tozuru oke itinye akwụkwọ maka ụmụ amaala UAE ka ọ nọsịrị na mba ahụ maka ọ dịkarịa ala afọ 30. Yabụ, n'eziokwu, ị ga-anọrịrị ebe ahụ ogologo oge. N'ihu ọbụna nweta ohere iji bụrụ nwa amaala UAE.
Kedu ihe m kwesịrị iji nweta ọrụ na UAE?
Ihe mbu bu akwukwo UAE maka ichota oru. Dịka ọmụmaatụ, asambodo nweta UAE dị elu n'ụlọ akwụkwọ. Ga-eme n'ezie nyere gị aka ibili mmanya maka ohere ọhụrụ. Ma oburu na inwere mahadum nke mba gi. Ọ ga-eme n'ezie nyere gi aka iru oru UAE. N’aka nke ozo, asambodo agwa na akwukwo asambodo ndi ozo ndi ozo sitere na isi US dika US ma obu UK uru na Arab ụwa. Mana n'eziokwu, naanị ihe ga - enye gị ọrụ bụ ibidoghachi. Ọ na-azụmaahịa ahụmịhe gị, yabụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgbalịsi ike ime ka CV gị zuo oke. Gbalịsie ike na-enweghị mmejọ ọ bụla. Ekwesiri icheta nke ahụ na United Arab Emirates ị nwere ike iji bekee CV.
Mba Jọdan na ndị Ọbịbịa
Kedu otu esi amalite dika onye ala ọzọ na Jordan?
Ebe ọzọ na Middle East bụ Jọdan. N'ihi na obodo a na-enwe ihe ndekọ. Ha bụ ezigbo mmadụ ma nwee ya ụlọ nke ihe karịrị nde ndị Palestian 6 gbara ọsọ ndụ dịka 2. Yabụ, ọ bụghị naanị na ha na-arụ ọrụ kamakwa na-akwado ndị ọzọ. Ihe dị ka 2015% nke ndị Jordan bụ ndị Arab. Ọzọkwa, 98% fọdụrụ bụ agbụrụ agbụrụ. Labortù Ndị Ọrụ Mba Nile na Jordan. Nke ekwuputara na TV na News na onodu oru na Jordan siri ike. N'ihi na ọnụnọ nke ndị ọrụ ruru eru dị ala na ọnụ ọgụgụy. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ si mba ọzọ na mkpesa akpọrọ "Ahịa siri ike Aghọọ Ihe Challema Aka". Yabụ, ịkwesịrị ịdị njikere na chọọ ọrụ arụmọrụ bara ụba karịa. Nchịkwa ma ọ bụ ọbụna ndị isi nchịkwa.
N'ihi nnukwu nyocha emere na Septemba 2016. Nke otu gọọmentị hiwere isi ma mepụta ya. Otutu ndi mmadu enwetarala oke onyinye onyinye oke aka nke Jordan n’ogbe ndi mmadu gbara ọsọ ndu. Ọzọkwa, n'ahịa ọrụ mba ya, ha ekwupụtawo na ndị bi na ya na-arụ ọrụ. Ozi gọọmentị metụtara na-aza ajụjụ maka ndị ọrụ si mba ọzọ. Maka otu esi abawanye ọnụego ọrụ na Jọdan n'ahịa mba.
Ya mere, enwere m ọrụ ọ bụla na Jordan?
N’aka nke ọzọ, ha na-agba mbọ ịchọta ụzọ ha ga-esi hụ na gburugburu ebe ọrụ dị mma maka ndị ọrụ niile. Ọbụghị naanị onye si mba ofesi kama maka ụdị ọpụpụ na ụdị ọrụ obodo. Ọzọkwa, otu esi etinye ndị gbara ọsọ ndụ Syria na-enweghị iwepu ndị ọrụ Jordan. Nke ahụ bụ ajụjụ buru ibu site n'aka ndị otu Europe. Imepere ndị gbara ọsọ ndụ ọrụ dị ọrụ iji wee hụ na a na-elebara anya iji lebanye anya n'ọrụ kacha nta ụkpụrụ ọrụ maka onye ọrụ si mba ọzọs, agbanyeghị ọnọdụ ha. Inwe ikike ịnwe ikike inweta Jọdan, ịrụ ọrụ na tandem na onye were gị n'ọrụ bụ ihe mbụ chọrọ ngwa maka ọrụ na Jọdan dị mfe ịnweta site na weebụsaịtị gọọmentị.
Mba Kuwait na Ndị Ọhụụ
Kedu otu esi amalite dị ka otu n'ime ndị ọrụ mba ọzọ na Kuwait?
Na Kuwait, enwere mgbanwe dị ukwuu na afọ ndị gara aga. Otu n’ime ihe atụ bụ usoro nkwado mba ofesi. Bụrụ onye iwu dị na nsonaazụ ya, ndị mba ọzọ ga-enweta ego n’aka ndị were ya n’ọrụ iji nweta akwụkwọ ikike. Yabụ, enwere smart dum na otutu ndi mmadu n’agba mbo ime ka ha gha acho oru n’irus. Enwere mgbanwe dị ukwuu na August 2008, MP Abdullah Al-Roumi kwuru na ọ na-aga ịkwadebe iwu iji kagbuo usoro nkwado ndị ọrụ si mba ofesi kafeel nke Kuwait. Yabụ, ha jikwaa nke ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ọzọkwa, mgbanwe ahụ bụ inyere ndị mbịarambịa aka. Gọọmentị na-eme atụmatụ ịkagbu usoro nkwado iji chepụta usoro ọhụrụ. Ha na-eche na ọ bụ eziokwu n'ihi na nke a ga-eme ka ndị mba ọzọ nyefee ikike obibi ha. Site na mgbe ahụ, Minista na-ahụ maka ọhaneze na ndị ọrụ na-ewere okwu ha.
N'akụkụ na-adịghị mma, dị ka onye mba ọzọ dịka ọmụmaatụ si Switzerland. Inwere ike inweta ọrụ na Kuwait. Ma a ga - akwụ ụgwọ ọrụ ahụ n'ezie ma ogologo oge. Yabụ na nke ahụ, ọrụ ugbua na Kuwait na-eme ka ndị nwere ọgụgụ isi. Mana tupu ịmalite ọrụ, ịchọrọ visa visa ọrụ dị ka n’obodo Arabic ọ bụla. Inye akwụkwọ ikike ịnata ọrụ na visa ọrụ bụ ihe dị iche iche kpamkpam, iji wee nweta ikike ọrụ, ọ ga-abụrịrị na gị na onye were gị n'ọrụ rụtụrụ ọrụ, mgbe ị nwetasịrị akwụkwọ ikike ọrụ, ọ ga-adị gị mkpa iji nweta visa nnabata ọrụ n'ụlọ ọrụ nnọchite anya ọ bụla.
Ya mere, enwere m ọrụ ọ bụla na Kuwait?
Obodo Kuwait nwere otu weebụsaịtị kachasị mma. Ọ dị mma, mara maka etiti amaala ndị visa. Nke ahụ bụkwa n'agbanyeghị ụdị Visa nke ndị ala ọzọ nwere ike ịtụ anya. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ visa ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ visa ndị ọbịa, na nke ahụ, ị ​​nweghị ike ijikwa n'ezie. N'aka nke ọzọ, na visa ọrụ wdg N'ezie, nsogbu agaghị adị na ịchọta ozi dị na Bing ma ọ bụ Google. Edere saịtị kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ na Kuwait na ntanetị. Nwere ike ịhụ ka ha na-ede Ọrụ dị na Kuwait maka ndị mba ọzọ ma ọ bụ ọrụ na Kuwait.
Kuwait dị ka obodo nwere ohere kachasị mma na ngalaba ego. Yabụ, iji chọta ọrụ dị ka onye mba ọzọ, ịkwesịrị ịkụ ọrụ ego na mbụ. N’aka nke ozo, mgbe anyị jiri ha tụnyere mba ndị ọzọ dị n'etiti - ọwụwa anyanwụ ọ bụghị na ọ dị mfe ịnweta mana enwere ike. Ndị ọchụnta ego ndị Kuwait dị mkpa nwere ike bụrụ ndị achọrọ maka itinye akwụkwọ maka ọrụ ndị ọrụ ndị nnọchi anya obodo Kuwait.
Mmechi maka Dubai dịka onye ọrụ mba ọzọ
Ọrụ na Dubai N'ihi Ndị mba ọzọ dị mma ịga ebe niile n'ụwa. Na nke a n'uche, ọtụtụ ndị mmadụ. Karịsịa ndị ụlọ ọrụ, na-enwe ezigbo ohere maka ọrụ. Naanị eme ihe ekwu bụ ụdị ndụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Ndị ọbịa ọhụrụ nke Emirates. Kwesịrị imegide ọtụtụ iwu. N'aka nke ọzọ, Dubai na-anabata ndị isi obodo. Otu n'ime ihe atụ ndị ahụ bụ Dubai Marina, hotels ma ọ bụ arụ ọrụ ụgbọala. N'ime ebe ndị a niile na Dubai. Enwere ike ịchọta ndị ọhụrụ. Site na Pakistani ndị ọrụ ruo ndị isi India. Yabụ, ụlọ ọrụ anyị na-adụ ndị ọrụ ọdụ n'akụkụ ụwa niile. Kpamkpam, ileta Dubai City na malite ịrụ ọrụ ná mba ọzọ.
Mba ọ bụla na-eme ka saịtị ndị a dị Maka ndị na-achọ ọrụ na mba ofesi chọrọ inweta ọrụ na Middle East. Yabụ ọzọ, anyị na-echetara gị gbasara saịtị ọrụ a.
Ebe kachasị mma na saịtị
Gulf Talent nwere ọtụtụ ezi mma na ọrụ ọkachamara
Ọrụ na Dubai nwere nkọwapụta ọrụ na nke akọwapụtara ebe na Dubai
Ọrụ Abu Dhabi nwere akwụkwọ ozi na ebe dị iche iche na Abu Dhabi
Dubizzle na nkewa dị ka nnukwu ebe maka Abu Dhabi
Glassdoor mara na inwe ohere na Abu Dhabi na Dubai
Bayt a na-atụle ya ịbụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ kachasị achọ ọrụ na Middle East.
Oké Osimiri Monster bu akara oru ndi mmadu choro di egwu nke diri site na ntaneti nke ntaneti.
Ọrụ Gulf ahịa dị mma maka ọrụ ndị isi ọkwa.
Jet Ọrụ bụ ihe a ma ama na nwere nhọrọ nchọta ọrụ maka UAE.
N'ezie bụ ụdị ọrụ US nke saịtị UAE.
Mụta 4 Ezi ọ dị ka ọrụ nkuzi mana enwere ọrụ na ngalaba ndị ọzọ.
Laimoon bụ saịtị mara maka nchịkọta ọrụ site na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ kpọmkwem.
Ịkụzi Bekee na Middle East
Smartzọ ọzọ dị mma, biko echefula na nke ahụ bụ ịkụzi Bekee. Na ụlọ ọrụ anyị na-echetakwara anyị mgbe niile, maka ndị nwere ike ịmasị ịkụzi, ịkụzi Bekee. Ha nwere ike n'ezie họrọ smart na kacha nhọrọ. N’ezie, ọ bụrụ n’ịsụ asụsụ Bekee nke ọma, ma ọ bụ ede ede. Ndị otu ndị ọrụ anyị ga - adụ ọdụ ka ndị na - achọ ọrụ ọhụụ na - agagharị na saịtị ọ bụla maka ohere oru maka izi ihe na UAE ha nwere ike nwalee saịtị dika;
Total ESL bụ ngagharị na-arụsi ọrụ ike maka ndị nwere mmasị izi ihe ná mba ọzọ.
ESL cafe bụ otu n'ime ọrụ mmeghe kachasị mma sitere na gburugburu ụwa.
Na-anwale bụ saịtị na-agbakọta nnukwu ọrụ nkuzi.
Ihe odide Recruiting achọpụtala na ọ bụ otu n’ime ndị izizi ESL izi ihe dịnụ.
Maka ndị nwere mmasị Ọrụ Ego, nke a bụ ụfọdụ Ọpụpụ na Kọwaa Portals Job;
eFinancialCareers bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ọchụchọ kachasị amasị maka ọrụ ego dị na weebụ ma ọ bụ ezie na ọ bụghị otú ahụ ka Qatar dị
Gaanụ ná Mba Ọzọ achọpụtawokwa ọrụ ọma
Ọrụ ndị ọzọ bụ saịtị nke dịworo maka oge ugbu a, ma o yiri ka ọ bụ nnukwu ihe dị n'etiti mgbasa ozi na saịtị ndị a na saịtị ndị ọzọ.
LinkedIn bụ ọkachamara netwọk ọkachamara maka ịmepụta kọntaktsị na ubi yana ebe mmasị gị
E nwekwara weebụsaịtị ndị ọzọ dịka;
The Guardian a maara na ọ bụ otu n'ime ibe weebụ maka ndị na-ere ahịa na UAE
Telegraph enye ezi ego maka nkwadebe
Middle East, ọkachasị UAE, Saudi Arabia na Qatar. Mgbe niile enwere ezigbo ọrụ a na-enye ndị mba ọzọ n'ọtụtụ ọrụ, karịa mpaghara ndị ọzọ dị n'etiti ọwụwa anyanwụ. Nanị n'ihi na ha na-achọ ịmalite ọtụtụ ọrụ. Mana n'akụkụ ọjọọ, enwere usoro ụfọdụ achọrọ maka ndị ọrụ nọ na mba ofesi. Iji maa atụ, akwụkwọ a ga-achọ ka achọrọ maka ọrụ ọrụ ọ bụla bụ:
Kaadị Kaadị Mba
Nchịkọta nke kaadị njirimara nke nne na nna
Foto ntinye akwụkwọ 24 nke agba agba
License Driving (ma ọ bụrụ na ịnwere)
Ozi Visa na akwụkwọ
Akaụntụ Bank si mba gị
Mahadum Ụlọ Akwụkwọ
POI - Ihe akaebe nke njirimara
Ọzọkwa akwụkwọ diploma Asambodo (ma ọ bụrụ na ị nwere)
2 agba akwụkwọ nke paspọtụ
POA - Akaebe nke Adress
O siri ike ịme ka kọntaktị mahadum
Na ihe ole na ole ndị ọzọ ha nwere ike ịrịọ
Yabụ, dịka ị hụrụ, ohere dịịrị gị. Naanị ihe ị ga - eme bụ inwe obi ike zuru oke iji bido ndụ ọhụrụ ná mba ọzọ. Enwere ndị mbịambịa 3 nde na-arụ ọrụ na Middle East. I nwekwara ike ibu otu n’ime ha. N’ezie n’ezie, ịchọrọ inwe ezigbo atụmatụ nke iji arụ ọrụ. Ọzọkwa, ihe niile ka emere n'usoro n'ala gị ma bido ịrụ ọrụ ná mba ọzọ. Companylọ ọrụ anyị na-echere akwụkwọ gị niile. Yabụ, biko debanye aha CV gị na ndị otu HR. Ndị ọrụ gị dị njikere inyere gị aka n'ezie !.
0 Kedu ndị edemede